नेपाल ओमानसँग पराजित, नयाँ ओपनिङ्ग जोडी पनि चलेन – Talking Sports
नेपाल ओमानसँग पराजित, नयाँ ओपनिङ्ग जोडी पनि चलेन
नेपाल आईसिसि क्रिकेट बिश्वकप लिग टु अन्तर्गतको ट्राइ सिरिजको पहिलो खेलमा ओमानसँग १८ रनले पराजित भएको छ ।
नयाँ ओपनिङ्ग जोडी पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल नचल्दा नेपाल ओमानलाई दुई सय रनभित्र रोक्दा रोक्दै पनि पराजित हुन पुग्यो । टस जिती पहिलो फिल्डिङ्ग रोजेको नेपालले ओमानलाई ५० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १ सय ९७ रनमा रोकेको थियो । जवाफमा नेपाल ४६ दशमलव चार ओभरमा एक सय ७९ रनमा सिमित भयो ।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पुर्व कप्तान पारस खड्का सस्तैमा पेभिलियन फर्किएपछि स्तब्ध बनेको त्रिवि मैदानमा शरद भेषावकर र दिपेन्द्र सिँह ऐरिले संयमतापुर्वक खेलेका थिए । सुस्त शुरुवात गरेको नेपालले ज्ञानेन्द्रलाई एक र पारसलाई तीन रनमा गुमाएको थियो ।
आकर्षक खेलेका दिपेन्द्रले पाँच चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै ५७ बलमा ३६ रन बनाए । आरिफ शेख र रोहित कुमार पौडेल पनि जम्न नसकेपछि शरदले बिनोद भण्डारीसँग ४३ रन जोडेका थिए । भण्डारीले २५ बलमा २६ रन बनाए । उनले दुई चौका र एक छक्का प्रहार गरे ।
पहिलो एकदिवसीय अद्र्धशतक पुरा गरेका शरदले अकिब इल्यासको बलमा बोल्ड हुनुअघि १ सय ८ बलमा ५५ रन बनाए । उनले ६ चौका हिर्काए । नेपालको लागि सन्दिप लामिछानेले २७ बलमा २८ रन बनाएका थिए । उनले तीन चौका र एक छक्का प्रहार गरे ।
शरद र सन्दिपले नवौं विकेटका लागि ३८ रनको साझेदारी गर्दै नेपालको आशा जोगाएर राखेका थिए । ओमानका लागि जिसान मक्सुदले तीन विकेट लिएका थिए । यस्तै बिलाल खान र कलिमुल्लाहले दुई–दुई विकेट लिएका थिए ।
पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलिरहेका भारीले कसिलो बलिङ गर्दै तीन विकेट लिएपछि ओमान सामान्य योगफलमा समेटिएको थियो । भारीले दस ओभरमा मात्र १४ रन खर्चिदै ३ विकेट लिएका थिए । उनले ओमानका कप्तान जिसान मक्सुद र सुरज कुमारलाई तीन बलको अन्तरमा पवेलियन फर्काएका थिए भने ३३ रन बनाएका सन्दिप गाउडलाई स्टम्पिङ गराएका थिए ।
करण केसीले नेपालका लागि सर्वाधिक ४ र दीपेन्द्र सिंह एरीले १ विकेट लिए । ओमानका लागि सर्वाधिक रन बनाउने क्रममा महमन्द नदिमले ६९ रन प्रहार गरे। उन्ले ९६ बलमा ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
टेलरको शतकमा न्युजिल्याण्डले भारतबिरुद्ध बिशाल लक्ष्य पछ्यायो
डेब्युमा भारीको उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेपाललाई ओमानबिरुद्ध १ सय ९८ रनको लक्ष्य
पोलार्डको बिष्फोटक ब्याटिङ्गमा न्युजिल्याण्डलाई १ सय ८० रनको लक्ष्य
भारतबिरुद्ध अष्ट्रेलियाको पहाडजस्तो योगफल, फिन्च र स्मिथको शतक
यस कारण मेस्सी र रोनाल्डोभन्दा म्याराडोना महान
म्याराडोना: तस्बिरमा उनको जीवन
मनाङमा ३३ सय ५० मिटर उचाइमा भ्राका नेसाङ फुटबल लिग शुरु
एम्बुलेन्स समयमा नआएको भन्दै छानबिन गर्न म्याराडोनाको वकिलको माग
Pingback: नेपाल बिरुद्ध खेल्न हामी तयार छौं : अमेरिकाका प्रशिक्षक र कप्तान – Talking Sports
कायरोन पोलार्डले बिष्फोटक ब्याटिङ्ग गर्दै ३७ बलमै नटआउट ७५ रन बनाएपनि वेष्ट इण्डिजले न्युजिल्याण्डलाई पहिलो ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा १ सय ८१ रनको बिशाल लक्ष्य दिएको छ ।
अकल्याण्डमा बर्षातका कारण १६ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा पावरप्लेसम्म खेललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेपनि पोलार्डले उत्कृष्ट ब्याटिङ्ग गर्दै टिमलाई ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ८० रनसम्म डोर्याएका थिए ।
पहिलो फिल्डिङ्ग गरेको न्युजिल्याण्डले आन्द्रै फ्लेचरले दिएको छिटो छरितो शुरुवातलाई पाखा लगाउदै वेष्ट इण्डिजको ५९ रनमा पाँच विकेट झारेको थियो । तर पोलार्डले आफूलाई किन ट्वान्टी ट्वान्टी संरचनामा उत्कृष्ट ब्याट्स्म्यान भनिएको साबित गरि छाडे । उनले फाबियन एलेनसँग छैटौं विकेटका लागि ८४ रनको सझेदारी गरे ।
एलेनको विकेट गएपछि उनले एक्लै वेष्ट इण्डिजको पारी सम्हाले । पोलार्डको इनिङ्गसमा ८ छक्का र तीन चौका सामेल थियो । एलेनले २६ बलमा चार चौका र एक छक्काको मद्दतमा ३० रन बनाए ।
फ्लेचरले १४ बलमा तीन चौका र उति नै छक्कको मद्दतमा वेष्ट इण्डिजलाई पहिलो विकेटका लागि चौथो ओभरभित्र ५८ रनको शुरुवात दिएका थिए । तर त्यसपछि वेष्ट इण्डिजले मात्र एक रन जोड्दै अस्वाभाविक रुपमा पाँच विकेट गुमाएको थियो ।
यस क्रममा लकि फर्गुसनले तीन र टिम साउदीले दुई विकेट लिएका थिए । फर्गुसनले चार ओभरमा २१ रन खर्चदै पाँच विकेट लिए ।
कप्तान आरोन फिन्च र पुर्व कप्तान स्टिभन स्मिथले शान्दार शतक प्रहार गरेपछि अष्ट्रेलियाले भारतलाई पहिलो एकदिवसीयमा ३ सय ७५ रनको बिशाल लक्ष्य दिएको छ ।
सिड्नी क्रिकेट ग्राउण्डमा अष्ट्रेलियाले पहिलो ब्याटिङ्ग गर्दै ५० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा ३ सय ७४ रन बनायो । पहिलो १० ओभरमा भारतले खेललाई नियन्त्रणमै राखेपनि अष्ट्रेलियाले बिशाल योगफल खडा गर्न सफल रह्यो ।
सम्हालिएर इनिङ्गस शुरु गरेको अष्ट्रेलियालाई डेविड वार्नर र फिन्चले पहिलो विकेटका लागि १ सय ५६ रनको शान्दार शुरुवात दिलाएका थिए । वार्नरले ७६ बलमा ६९ रन बनाए । उनको इनिङ्गसमा ६ चौका सामेल थियो ।
त्यसपछि फिन्चले स्मिथसँग अर्को शतकीय साझेदारी गर्ने क्रममा दोश्रो विकेटका लागि १ सय ८ रन जोडेका थिए । फिन्चले १ सय २४ बलमा ९ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । अष्ट्रेलियाले मार्कस स्टोइनिसलाई शुन्यमै गुमाएपनि स्मिथ र ग्लेन म्याक्सवेलले भारती बलरहरुलाई निराश पारे ।
म्याक्सवेलले १९ बलमै ४५ रन ठोक्दै अष्ट्रेलियाले सोचेभन्दा चाडो ३ सय रन कटाउन सहयोग गरे । उनले पाँच चौका र तीन छक्का प्रहार गरे । निकै छरितो खेलेका स्मिथ अन्तिम ओभरमा आउट हुनु अघि १ सय ५ रन बनाउदै नवौं एकदिवसीय शतक बनाए ।
मात्र ६६ बलको सामना गरेका स्मिथको इनिङ्गसमा ११ चौका र ४ छक्का सामेल थियो । फिन्चको भने यो १६ औं एकदिवसीय शतक हो । भारतको लागि मोहम्मद सामीले तीन विकेट लिए ।
दुई सुपरस्टार एकै समयमा इतिहासकै उत्कृष्ट खेलाडीको दाबी गर्दै गरि खेल्दै गर्नु फुटबल फ्यानहरुको अहोभाग्य हो र लियोनल मेस्सी र क्रिष्चियानो रोनाल्डो अझै पनि त्यो दाबेदारीमा हरेक हप्ता कायमै रहनु समर्थकहरु थप भाग्यमानी बन्नु हो ।
यो उत्कृष्ट खेल र महानताको दाबेदारीमा कराडौं फुटबल समर्थकहरु साक्षी छन् । यी दुई खेलाडीहरुको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रत्येक कोणबाट हेर्न पाइरहदा युट्युबलाई धन्यबाद दिनै पर्छ ।
जब डिएगो म्याराडोना सर्वकालीन महान बन्नका लागि दाबेदारी गरिरहेका थिए बिश्वका अधिकांशले उनको खेलको झलक चार बर्षमा एक पटक मात्र देख्न पाएका थिए जब उनले १९८२ देखि १९९४ सम्मका चार बिश्वकप खेलेका थिए । बिशेषगरि एसियाका पिछडिएका मुलुकहरुमा म्याराडोना बार्सिलोना वा नापोलीमा खेल्दा धेरै कमले मात्रै उनको खेलको अनुभव गर्न पाए ।
अनलाइनमा अहिले म्याराडोनाका केही भिडियोहरु छन् जसले १९८६ बिश्वकपमा मेक्सिकोको आज्टेका स्टेडियममा जुन २२ मा इङ्गल्याण्डबिरुद्ध उनले गरेको त्यो बिश्वबिख्यात सोलो गोलसहित उनको अन्य खेलको झल्कोहरुलाई जीवन्त राखेका छन् । तर भिडियोहरुले उनी कस्तो सामथ्र्य राख्ने गर्थे भन्ने मात्र संकेत गर्छन् । ती भिडियोहरुले उनी सर्वकालीन महान फुटबलर रहेको बिवादित तथ्यलाई बलियो बनाउनका लागि पर्याप्त प्रमाणहरु भने दिन सक्दैनन् ।
अझै गाह्रो के छ भने उनी भन्दा अघि खेलेका खेलाडीहरुलाई महान कसरी बनाउने भन्ने प्रमाण पनि निकै कम छ । पर्याप्त भिडियो प्रमाण नभएकै कारण हँगेरीका फेरेंक पुस्कास, स्पेन र अर्जेन्टिना दुवै देशबाट खेलेका अल्फ्रेडो डि स्टेफानो, ब्राजिलियन लेजेण्ड पेले, नेदरल्याण्ड्सका योहान क्रुुएफ र जर्मनका फ्रान्च बेकनबाउर लगायतका खेलाडीहरुको लिगेसीमा प्रश्न गर्नेहरु अझै छन् ।
उनीहरु फरक परिस्थिति, वातावरण, नियममा खेलेका कारण नै यो बहस सधै बिवादास्पद हुदै आएको छ । त्यसैले म्याराडोना प्राविधिक रुपमै फुटबल खेल्ने उत्कृष्ट खेलाडी हुन भनेर दावी गर्न सकिदैन ।
जे भएपनि यो बहस म्याराडोना सर्वकालीन महान भएको दाबी गर्नका लागि हो । र यसको आधार के हो भने सर्वकालीन महानमा दाबेदारी दिने गरेका अन्य कुनै खेलाडीहरुले फुटबल एक टिम खेल हो भन्ने कुरालाई म्याराडोनाले जसरी गलित साबित गर्न सकेनन् । न उनीहरु कहिल्यै यसको नजिक पनि पुग्न सके ।
आफ्नो करिअरको अधिकांश समय म्याराडोना यस्तो क्लबहरुबाट खेले जहाँ बिश्वलाई नै माथ दिने खेलाडीहरु थिएनन् । १९८६–८७ को सिजनमा नापालीलाई सिरी आ को उपाधि दिलाएको टिमको सुची नै हेर्ने हो भने त्यहाँ म्याराडोनाबाहेक अन्य कोही पनि यस्ता खेलाडी थिएनन् जो लिगको उत्कृष्ट टोलीमा समावेश हुन सक्थे ।
अर्जेन्टिनालाई १९८६ को बिश्वकप जिताउदा र १९९० को फाइनलमा पुर्याउदा तुलनात्मक रुपमा केही राम्रा खेलाडीहरु त थिए तर कसैले पनि पेलेले १९७० मा जारजिनियोको जस्तो समर्थन पाए त्यस्तै म्याराडोनाले होर्गे भाल्डानोको पाएका थिए भनेर बहस गर्दैनन् ।
प्रतिभाशाली खेलाडीहरु रहेको टिममा प्रतिभाशाली हुनु एउटा कुरा हो । आफ्नो क्लब टोलीमा उत्कृष्ट खेलाडीहरु भएको कारण मेस्सी र रोनाल्डो भाग्यमानी हुन् । तर म्याराडोनाले त निकै नै साधारण स्रोतहरुको उपयोगमा जादु गरेर देखाएका थिए ।
आफ्नो सानो कदमाथि अपेक्षाको भारी लिदै त्यसमा खरो उत्रिएको कारण पनि म्याराडोना एक अपवाद भएका हुन् । उनले १९८४ मा नापोलीका लागि सम्झौता गर्दा क्लबले एक पटक पनि लिग जितेको थिएन तर म्याराडोनाको आगमनपछि नापोली समर्थकहरुले उपाधिको सपना देख्न थाले । उनी उनी जति उत्कृष्ट खेलाडी थिए त्यती नै कप्तान पनि ।
मेस्सी लगायत अन्य फुटबलरहरुलाई तुलनात्मक रुपमा बढी दवाब होला तर फुटबलका आधुनिक सुपरस्टारहरुसँग पब्लिक रिलेसन एक्सपर्ट र मनोबिश्लेषकहरुको साथ हुने गर्छ । यी सब नुहदा म्याराडोनाले सबै कुरा एक्लै नियन्त्रणमा राखेका थिए भने देश र क्लबलाई एकपछि अर्को उपलब्धि दिलाइरहे ।
युरोपा लिगः लेस्टर, आर्सनल, टोटेन्ह्याम दोश्रो चरणमा, नापोलीको म्याराडोनालाई बिशेष सम्मान
म्याराडोना कि पेले ? को महान भन्ने बिवाद अझै पनि निरन्तर चलिरहनेछ
ड्रग्स, यौनकर्मी र नक्कली लिँगः म्यारोडोनाको बिवादास्पद क्षणहरुको टाइमलाईन
म्याराडोनालाई श्रद्धान्जलीः के भन्छन् रोनाल्डोदेखि पेलेसम्म ?
आर्सनलको दुर्गतिः न च्याम्पियन्स लिग, न युरोपा लिग